သရုပ်ဆောင် “ဒေါင်း” ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု နှင့် တစ်ချိန်က သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ အကြောင်း – Maharmedianews
သရုပ်ဆောင် “ဒေါင်း” ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု နှင့် တစ်ချိန်က သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ အကြောင်း
– နှစ်တန်းမှာ မန္တလေးကိုပြောင်းတဲ့အခါ မြို့ကလေးမှာကျန်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းတယ် ။မန္တလေး ဒေါင်းအတွက်မြို့တော်ကြီးပေါ့ ။
-ငယ်ငယ်ကတည်းက “ဒေါင်း” လုပ်ချင်ခဲ့တာ သုံးခုရှိတယ် ။ ဂီတသမား ! ဘောလုံးသမား ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ။
-ပဉ္စမတန်းဟာ” ဒေါင်း”ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ဖြတ်သန်းမှုလို့ပြောရမယ်။ငါးတန်းမှာ “ဒေါင်း ” ဂစ်တာ စတီးတယ် ! ဘောလုံးစကန်တယ် ! ကဗျာစရေးတယ် ။
-အခုထက်ထိ”ဒေါင်း” မှတ်မိသေးတယ် ပထမဆုံးဂစ်တာစတီးတဲ့သီချင်းက ဖိုးချိုရဲ့ စိုးပိုင်မှုဧကရီ တမ်းချင်း ။လက်တွေနာတယ် ! လေ့ကျင့်ခန်းတွေကခက်တယ် ဒါပေမယ့် ဂစ်တာဟာ ဒေါင်းဘဝအတွက် အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ဂစ်တာတီးတတ်သွားတဲ့ “ဒေါင်း”က ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို တွေ့တိုင်းဂစ်တာ တီးပြရလေ့ ရှိသတဲ့။အခုမှပြန်တွေးတော့ “ဒေါင်း”က အားနာမိတယ်။
၄ တန်းမှာ ကျောင်းက ဘောလုံးပွဲမှာ ဝင်ကန်ဖို့ကြိုးစားတော့ ဆရာတချို့နဲ့ ကျောင်းသားအချို့က သူကိူပြောခဲ့ကြတယ် ။
“မင်းပုံစံနဲ့ကန်လို့မရဘူး ဂိုးပဲစောင့် “! အဲဒီစကားက ” ဒေါင်း” ကို ဘောလုံးမှာ အပြင်းအထန်ကြိုးစားဖို့ တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် ။အခြေခံဘောလုံးဆ်ုတဲ့ စာအုပ်ကို မရမကရှာဖတ်တယ် !ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကို ထုပ်ပိုးတဲ့ ဖော့တုံးတွေကိုကန်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ဖော့ကပေါ့တယ် ထိန်းသိမ်းရခက်တယ် ။ဖော့နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးရင် သားရေဘောလုံးက လွယ်ကူလာတယ် ။
နောက်တော့ ကျောင်းသားတွေကြားမှာ”ဒေါင်း” ကထင်ရှားတဲ့ ဘောလုံးသမားဖြစ်လာတယ် ။တွန်းတွနိးတိုက်တိုက် အင်တိုက်အားတိုက် ကန်တဲ့ ” ဒေါင်း” ကို ကျောင်းသားတွေပေးထားတဲ့နာမည်ရှိတယ် ! ” ဘီလူး”တဲ့ ။
-(7) တန်းနှစ်မှာ ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင် ဂစ်တာလေးတစ်လက်ဝယ်ဖူးတာကို သတိရတယ် ။
မန္တလေးမြို့ လမ်း ၈၀ ပေါ်က ဂစ်တာဆိုင်သေးသေးက ထင်းရှူးရောင် ဂစ်တာလေးတစ်လုံးကို ကျပ် ၈၀၀၀ ပေးပြီး တစ်စုံတယောက်ရဲ့ အော်ဒါမှာထားတဲ့ ဂစ်တာကို မရမကပြောပြီး ဝယ်ခဲ့တယ် ။ဂစ်တာလေးက အသံသာတယ် ! သိမ်မွေ့တယ် ! လိမ်မာတယ်။
(7) တန်းကျောင်းသားဘဝမှ ပရော်ဖတ်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမားဖြစ်တဲ့အထိ ” ဒေါင်း ” ဂစ်တာလေးကို ကိုယ်နဲ့မကွာ သိမ်းထားခဲ့တယ် ။
-(9) တန်းကတော့”ဒေါင်း” အတွက်မေ့မရတဲ့နှစ် ။
ရေငုံမှုများက နှလုံးသားကို နာကျင်စေခဲ့တဲ့နှစ် ။
(10) တန်းနှစ်မှာ ရန်ကုန်ကိုပြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ လွမ်းဆွတ်မှုတွေ အဆုပ်လိုက် အခိုင်လိုက်ပွင့်လာတော့တယိ ။မန္တလေးကို လွမ်းတယ် ။
သူငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းတယ် ။ ကိုယ်နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်လေးကို လွမ်းတယ် ။ ပြီးတော့ သူမကို လွမ်းတယ် ။အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်လို့ “ဒေါင်း” က ပြန်ပြောပြတယ် ။
အဲဒီတုန်းက ရန်ကုန်မှာ မပျော်တဲ့ “ဒေါင်း” က “မြို့ပြနှင့်ကျွန်တော်” ဆိုတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ရေးခဲ့တယ် ။
” အဲဒီနှစ်တွေ ကျွန်တော်ဘဝအခက်ခဲဆုံး ကျွန်တော့်မြို့က ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူနေမှုက်ု ပြန်တမ်းတမိ အချစ်ဦးအကြောင်း တွေးရင်းလည်းကျွန်တော်ပြန်ချင်တယ် ”
လို့ ကဗျာမှာသူရေးခဲ့တယ် ။
မန္တလေးကိုအကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ” ဒေါင်း” အတွက် ရန်ကုန်ဟာ ခက်ခဲတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲ ။
၂၀၁၀မှာတော့ Southern Myanmar FC ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးချုပ်ကိုင်မှုစနစ်တွေနဲ့ မျက်နှာသာပေးမှု စနစ်တွေက ဒေါင်းကို ဘောလုံးလောကမှာ မမြဲစေခဲ့ပါဘူး ။2008 ခုနှစ်တည်းက ကွယ်လွန်သူ တေးရေးဆရာ ကေအေတီဆီမှာ5နှစ်တာ သင်ကြားခဲ့တဲ့ဂီတပညာတွေနဲ့ အနုပညာမှာ မြှပ်နှံဖို့ သူဆန္ဒပြင်းပြခဲ့တယ် ။
ဒေါင်း ဘောလုံးလောကကို ကျော်ခိုင်းခဲ့တယ်။သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ။ဆာတိုရီ ရဲ့ ရွေးချယ်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းရင်း ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ် ။မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်ဖို့” ဒေါင်း” အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ ။
ွှုရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာလည်း ရိုက်ကူးထားပြီးပုဂံမြို့သူ ! အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ ဇာတ်ကားများဟာလည်း ဒေါင်းရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကို တခဲနက် အားပေးမှုရရှိစေခဲ့တယ် ။
လတ်တလောမှာလည်း ပထမဆုံးရုံတင်ကားဖြစ်တဲ့ “လိပ်ပြာစံအိမ်”ဟာလည်း ပရိတ်သတ်အကြားအထူးရေပန်းစားပြီး နိုင်ငံတကာပါ လှည့်လည်ပြသနေပါတယ် ။ ပရိတ်သတ်တွေလည်း အသိမှတ်ပြုခံထားရပြီးနောက်လာမယ့် ! လေဆန်ကကြိုး ! ဒဏ္ဍာရီမိုး စတဲ့ ဇာတ်ကားများဟာလည်း ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေဦးမှာပါ ။
ဆာတိုရီနှငိ့အတူ ထူးခြားသစ်လွင်တဲ့အနုပညာတွေ စတင်ဖန်တီးနေတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ကြိုးစားမှုမျာကို စောင့်ကြည့်ဝေဖန်ပေးဖို့လည်း “ဒေါင်း “နဲ့ ” ဆာတိုရီ “ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
ကဲ ဒေါင်းကို ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေရှိတယ်မလား?
← “မစိမ့်ထက်” ရေခဲတောင်ပေါ်မှပြုတ်ကျခေဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ” တောင်တက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကို တရားစွဲမယ်” လို့ ဖခင်ဖြစ်သူက ပြော
အသင်းပြောင်းပြီးနောက် အရံကစားသမားနေရာမှာတောင် ပါဝင်ခွင့် မရတဲ့ အောင်သူကို အားပေးစကားပြောခဲ့တဲ့ ကျော်ကိုကို →